Kedu ihe bụ ọkpọ ọkpọ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Taya knobs - otu esi emeso
Taya knobs - otu esi emeso
Kedu ihe bụ ọkpọ ọkpọ?
Ndị a emighị emi na kọmpatna-akụeji belatatayaibu ma melite ịgbanye arụmọrụ, n'agbanyeghị na traction na-ebugharị. Ha na-ekwe ka ukwu ahụ na-agbanwe karịa otu natayacasing.Bọchị 15 2018
Ọ bụrụ n’ịbanye n’ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe n’ụbọchị ndị a, ị ga - ahụ oke taya a buru ibu. Anyị nwere taya maka ọnọdụ dị iche iche, igwe kwụ otu ebe. Ọzọkwa, anyị nwere nha atọ ama ama ama ugbu a, yabụ na anyị agaghị abanye na nke ahụ.
Anyị na-aga ileba anya na arụmọrụ taya. E nwere ihe atọ na-emetụta nke a. Nke ahụ dabere na usoro nzọ ụkwụ, ngwakọta roba na ozu nke taya a, mana ka anyị lelee etu usoro a si emetụta ụzọ igwe gị.
Nke mbu anyi ga ekwu banyere otutu pim. Ana m ekwu banyere bọtịnụ roba, ọ dịghị ihe ọzọ. Nke ahụ bụ ihe m na-akpọ taya dị ala.
See hụrụ, roba nubs bụ n'ezie obere, mara ezigbo mma na taya. Ya mere, nke a ga-arụ ọrụ nke ọma na ebe ndị siri ike juru na nke a ga-agagharị nke ọma. Nke a agaghị egbochi gị yana ihe nwere nnukwu pimpụ, mana na elu siri ike, ma eleghị anya ịgafe obodo, nke ga-agbanye ọsọ ọsọ ma nke ahụ ga-ejiderịrị etiti, ị ga - ahụ etu ha si ebu nnukwu ma ugbu a na-akawanye mma Bta ahụhụ ihe dị nro na-enyekwa gị ikike ịme braking, mana ọ nwere ike ọ gaghị adị mma na ihe siri ike.
Ruo nzukọ a na taya ada. Mkpọchi ndị a bukarịrị ibu. Nke ahụ na-etinye roba karịa na ala, na-ata ata nke ọma n'ime ala dị nro, na-enye gị ezigbo braking ma na-anọdụ ala mara mma ma buru ibu.
Also nwekwara nnukwu akụkụ akpọrọ ebe ahụ maka ezigbo ijide na nkuku. Mgbe oke nke ihe nrịta, ihe na-esote nke bụ eziokwu bụ ebe dị anya na usoro profaịlụ. Dị ka usoro isi, ịbịaru ibe ha nso mgbe ha rapaara na taya etiti, ọ ka mma na ọnọdụ siri ike.
Ọ bụrụ na ịga n'ihu taya a, ị ga - ahụ na oghere dị n'etiti lugs ahụ ka ibu. Nke a ga-arụ ọrụ nke ọma na apịtị n'ihi na ọ ga-ekpochapụ nke ka mma nke pụtara na apịtị agaghị arapara na taya ahụ, mana ị ga-ahụkwa ọtụtụ ugwu ebe a ka igwu n'ime apịtị ahụ. Obosara taya ahụ yiri nke ahụ.
agbụrụ agbụrụ 2019
N'ihe banyere ọnọdụ, taya dị gịrịgịrị na-adapụsị n'apịtị, ebe nnukwu taya, nke sara mbara dị mma maka ọnọdụ akọrọ na-eme ihe ike. Otu nnukwu taya buru ibu nwere ike ise n'elu apịtị ahụ n'ọnọdụ ndị dị njọ n'ezie. Ya mere, ka anyị lelee profaịlụ nke taya.
Nwere bọtịnụ etiti na bọtịnụ n'akụkụ. Ndị a bụ ndị ị ga-eji mgbe igwe kwụ otu ebe nọ na mbinye ego, o doro anya na ọ bara ezigbo uru maka ịghagharị. Nke a bụ taya gbadara agbada nke nwere nnukwu stud n'akụkụ ya na ọdụ mgbe niile.
Nke a ga - enye gị ezigbo ijide gị ozugbo ịgbazite igwe kwụ otu ebe. Na-agbada na taya obodo, o doro anya na ọ pere mpe, obere akụkụ akpọrọ. Ọ ga-agbagharị ọtụtụ ngwa ngwa, mana ọ ga-enwe ọtụtụ obere njide na nkuku.
Ọ bụrụ na ị lelee etiti dị n'etiti, malite na taya a dị ala, enwere nnukwu lugs ọzọ n'etiti. Ha dịkwa ntụziaka dịka ị pụrụ ịhụ. A na-emechi ihu a na-eduga ka taya wee na-apụta ngwa ngwa, mana na azụ ị nwere akara ogo 90, yabụ na braking gị.
Na nke a taya ị nwere a n'ezie ike braking mmetụta. N'ụzọ doro anya, ụgwọ ọrụ maka nke a bụ na ọ gaghị agbanye ọsọ ọsọ dị ka profaịlụ dị ala n'etiti. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịhụ na ndị na-agbadata ala na-egbutu ndị ahụ dị egwu mgbe egwu a anaghị agbaji dịka o siri ike na ọ bụ ngwa ngwa ọzọkwa, nwee ọsọ na-agba ọsọ na ya.
Ga mba ike gafere, ị ga-ahụ usoro nzọ ụkwụ dị nwayọ karị na etiti, nke dị ala karịa, na-agagharị ọsịsọ, mana maka ịmegharị braking ị ga - akwụsịlata ngwa ngwa dịka ị ga - eji nnukwu oghere dị n'etiti ga - eme. Ọtụtụ taya bụkwa directional. Ihe m na-ekwu bụ na e nwere obere akụ́ n’akụkụ taya ahụ nke ga-egosi gị otu ị ga-esi gbaa taya a.
Ha nwere ike ịdị iche n’oge ụfọdụ site n ’ihu n’ azụ. Mgbe ụfọdụ ị chọrọ taya ihu ka ọ gafee ntakịrị karịa ma eleghị anya, ihe ndị ahụ taya na azụ ga-adịtụ mma karị. Enwekwara ụfọdụ taya ndị dị n’ihu ma ọ bụ n’azụ akọwapụtara nke ọma.
Ihe batara n’uche bụ ndị agadi Maxxis Minions. Igwe ihu na azụ nwere usoro nzọ ụkwụ dị iche iche, mana amaara m ọtụtụ ndị ochie ochie na-achọkarị njirimara nke taya ihu n'ihu ma jiri ya n'ihu na azụ, ma ọ bụrụ na ị na-eleba anya ọzụzụ dị iche iche, ị nwere ike ịgwa na ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ na-agafe agafe na-ahọrọ taya na-agba ọsọ ngwa ngwa ma dị mfe karịa nnukwu, taya dị arọ nke na-enye ọtụtụ njide mana ọ dị nwayọ. Ya mere, enwere taya nke dị mma na ngwa ngwa na ọkụ, mana enwere ike ịgbagha ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ dị mma n'okporo ụzọ apịtị na apịtị.
Ibu, taya dị arọ karị, ọtụtụ roba karịa ebe njigide dị ezigbo mkpa. N'ebe ụfọdụ, ịgbagharị nwere ike ịdị mkpa ma ị nwere ike iche maka ịga ntakịrị ala n'etiti, mana n'ozuzu ị ga-achọ nnukwu taya ka sie ike nke nwere akwa buru ibu karị. Enduro na-anọdụ ebe dị n'etiti, ọ nwere ike ịrị obere ala, mana ị gaghị enwe ike ịnya akwa taya n'ihi na ị nwere ike ịga ebe dị anya ma chọọ taya taya ọsọ ọsọ.
I nwekwara ike ime usoro ise na ọnọdụ niile dị iche iche. Gaghị arapara n’ahụ́ ụrọ ma ọ bụ n’okporo ájá. Nwere ike ịga maka taya etiti na ị ga-agbatị ihe n'etiti ma nwee olile anya na ọ na-arụ ọrụ maka usoro ndị a niile.
Ya mere, a kọwara profaịlụ taya. Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ mgbanwe. Maka ihe ndị ọzọ sitere na GMBN ị nwere ike pịa ebe a ebe m, Marc na Si na-ekwu maka nrụgide taya anyị na-eji.
Anyị na-anọchi anya gafee osisi, si cross-mba, enduro na downhill. Ya mere, pịa n'elu ebe ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ isiokwu ma ọ bụ pịa ebe a n'okpuru ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ otú Marc na-akọwa ma na-akọwa nkwusioru ndụdụ. Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a ma chọpụta na ọ bara uru, pịa bọtịnụ‘ Dị ka ’n’okpuru ma ị nwekwara ike pịa m ma ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ isiokwu ọ bụla sitere na GMBN.
Kedu otu m ga-esi ahọrọ igwe kwụ otu ebe ugwu ugwu?
Maka ịnyagharị na mba, ịrị elu arụmọrụ dị mkpa karịa traction ma ọ bụ ogologo oge, yabụ ịchọrọ ile anyatayandị dị fechaa ma tụgharịa ọsọ ọsọ (chọọ obere, lugs ndị jikọtara ọnụ). Maka ịnyagharị, ịgba gburugburutayaezi uche. Wantchọrọ ka traction dị larịị, ịdịte aka na ọsọ.
Na edemede ọ bụla anyị megoro, anyị na-ekwukarị gbasara ị nweta taya nke kwesịrị ekwesị. Ọ dị ezigbo mkpa. Ọ bụ naanị kọntaktị gị na ụzọ ahụ ka ị wee nwee ike idozi nkwusioru gị n'ụzọ zuru oke ma jiri eriri carbon mee ebe niile, mana igwe kwụ otu ebe agaghị agagharị nke ọma ma ọ bụrụ na ị nwere taya na-ezighi ezi.
Yabụ enwere ụdị, ogo na ụdị profaịlụ niile. N'isiokwu a, m ga-akọwa gị ụfọdụ n'ime ha ka ị nwee ike iji olile anya mee mkpebi dị mma gbasara taya ndị kwesịrị ekwesị maka gị. (Egwuru egwu elektrọnik) N'ime isiokwu a, m ga - eji taya Vittoria n'ihi na ha na - eme nnukwu taya, ha bụkwa onye anyị na - azụ ahịa ebe a na GMBN.
Mana olile anya na ndụmọdụ a kwesịrị inyere gị aka na ụdị niile anyị na-ekwu maka njirimara nkịtị nke taya niile. Tupu anyị adanye na ịhọrọ ezigbo taya maka ọnọdụ ụfọdụ akọwapụtara, ka anyị leba anya n’otú e si arụ taya. Ugbu a Doddy gara ụlọ ọrụ Vittoria na nso nso a maka nlegharị anya na ile anya. Ihe na-ada ụda dị na rim.
Ga-enweta mpịachi na waya waya na-arụ ọrụ dị iche iche, nke anyị ga-atụle mgbe e mesịrị. Casing ahụ bụ ọkpọ nke taya dịka nke a. Nkwado nhazi nke taya na-arụ ọrụ dị mkpa na nke a: Nchedo oghere.
Rọ nke ihe n'okpuru nzọ ụkwụ na-egbochi taya na-eti. Sidewall, akụkụ nke taya ahụ. Na-azọ, ndị isi nke taya, nke na-enye traction. (Egwú eletrik na-ada ụda) Ya mere, ihe mbụ anyị ga-eleba anya bụ usoro nzọ ụkwụ.
Nke a ga - abụ nnukwu ihe ị na - ekpebi etu ị ga - esi banye n'okporo ụzọ ị na - agba. Ya mere ị pụrụ ịhụ atọ dị iche iche nhọrọ, site na nzọ ụkwụ Y-taya na enduro, ịgafe obodo. Yabụ ị ga - ahụ nha dị iche iche nke studs a na - egosi ebe a, nwekwara ụdị dị iche iche, ụdị dị iche iche nke studs ndị a.
Yabụ nke a ga - ekpebi etu taya gị ga - esi jide ụzọ gị. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ndị a mara mma jidesie ike, ọmarịcha ngwe ụkwụ dị nro, mana ọmarịcha nnukwu nzọ ụkwụ karịa nke ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara siri ike. Ọ bụ ezie na nke a bụ moto ebe a, ị ga - ahụ na ọ bụ ihe a na - ahụkarị.
Ya mere, nke a ga-arụ ọrụ nke ọma na apịtị ma ọ bụ nro, ọnọdụ loamy ma ọ bụ mgbe mmiri dị. n'ihi na ọ na-akawanye mma ma na-egwu ala n'ime ala ebe nke a nwere ike ise n'elu ntakịrị na apịtị mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma na okwute, onye a ga-egwu apịtị, ma eleghị anya ọ gaghị adị mma na okwute nke taya obe, ị ga-ahụ na ha dị nnọọ ala karịa usoro ụkwụ abụọ a, yabụ, ọ ga-abụ ihe dị ka mils atọ. Na otutu otutu puta.
Nke ahụ ga-agagharị ngwa ngwa, mana ịghara igwu n'okporo ụzọ ahụ, ọ bụghị na mmiri mmiri. N’elu ala siri ike ị ka nwere ọtụtụ rọba n’elu ala. Ọ dị mma, ka anyị lelee taya abụọ Trail Y enduro n'ihi na ha yiri nke ọma.
You ga-ahụ na n'ezie ọtụtụ taya nwere ọdịiche dị n'etiti etiti na akụkụ akụkụ. Ndị nke etiti na-enye gị tra ọtụtụ oge ka ị na-anọkwasị ya mgbe ị na-agagharị, na mgbe ị na-achọghị ịtụgharị. Y’oburu n’ahu ihe di iche na taya a. na Martello, dị ala ma karị, ọ ga-enye gị ọtụtụ njide na mbara ala siri ike.
igwe kachasị ọnụ
Mota a ga-ejidekwu na apịtị, dịka m kwuru, ebe dị anya yana profaịlụ miri emi. Ma dịka ị pụrụ ịhụ akụkụ dị n'akụkụ, ugbu a ndị a na-ebuwanye ibu, yabụ nwere ike ịbụ mils anọ ma ọ bụ ise miri emi. Yabụ mgbe ị dabere igwe kwụ otu ebe, a ga-agụ gị ka igbanye onwe gị na unyi - ha buru ibu mana ha dị nso.
Ọzọkwa, na ala siri ike, ịdabere n'ihu ndị a ga-enye gị nnukwu akara ukwu na njide dị ukwuu. Sipes bụ obere ọnya na lugs nke taya, nke ezubere iji gbanwee nrụgide, nke na-enyekwu njide. Otu n’ime ihe kacha mkpa taya bụ ngwakọta rọba.
Usoro dị iche iche nke roba nwere ike ime ka taya yiri nke ahụ na-akpa àgwà dị iche iche. Nro dị nro na-enye ọtụtụ traction, ma na-eji nwayọọ nwayọọ na-agagharị ma na-eyi ngwa ngwa. Ọtụtụ mgbe, ụdị nwere ike iji ogige abụọ, atọ ma ọ bụ anọ dị ka Vittoria, na-agbasi ike karị, na-agagharị ngwa ngwa, na-agbakwunye profaịlụ na-eyi na etiti ma dị nro n'akụkụ profaịlụ.
Ọ bụrụ na anyị ele anya na nzọ ụkwụ dị elu, anyị na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọzọ na njedebe nke ụdịdị dị iche iche, anyị nwere Motaversus the Barzo nke bụ taya mba na-agafe agafe na mgbe ahụ ụzọ taya enduro, ị nwere ike ịhụ na ọ dị omimi karị, ndị a bụ 29 inch wiil, ọ bụ ezie na m ebe m na-anọdụ a anya fọrọ nke nta ka atọ ma ọ bụ anọ mils ala, otú n'ozuzu dayameta nke wheel na-nta. Ihu ọma, ọ bụ maka ụdị mbara ala ị na-agba. Ya mere, nke a ga-abanye n'ime ala dị nro nke na-eche ihu n'ịkwọ ụgbọala ike.
Ọ bụ ezie na taya dị ala dị ntakịrị banyere ịgbagharị ngwa ngwa. Ya mere ị pụrụ ịhụ na taya abụọ a ka emepụtara maka ihe abụọ dị iche iche: Otu maka Enduro-Trail, otu maka ụgbọ ala Cross-C. Ezubere profaịlụ Taya maka ala pụrụ iche na n'okpuru ọnọdụ pụrụ iche.
Get nwere taya akọrọ ma ọ bụ mmiri pụrụ iche na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ndị a, mana ọ bụrụ na ị bi na UK n'oge oyi dị ka m, ị nwere ike ịkwọ ụgbọala mara mma siri ike, ọbụnadị nkume ndị kpọrọ nkụ, wee maba n'ime ụfọdụ apịtị dị nro ma ọ bụ ụzọ ụkwụ ọhụụ. . Na ọnọdụ a ị chọrọ ezigbo taya niile. (egwu eletrọniki na-atọ ụtọ) You nwere ike ịnweta taya ihu na azụ azụ, ọ bụ ezie na e nwere.
Ọ bụghị ọtụtụ ụdị na-eji otu taya na azụ azụ ụbọchị ndị a. Ma m na-ekwu banyere eziokwu ahụ na taya ahụ dị iche na ihu na azụ. N'oge ọkọchị, ndị mmadụ ga-etinyekarị ọkara mpe mpe azụ.
Ọ ga-abụ igwe na-agba ọsọ ọsọ n'ihi na ọ dabara naanị na taya ahụ etiti na-apụta na ọ ga-agbagharị ngwa ngwa. Otu ihe ọ naghị eme bụ breeki n'ihi na ị na-ewepụkwa akụkụ ndị ahụ n'akụkụ ya. Yabụ na ọnọdụ a enwere m ụzọ dị larịị, agbadara m ọsọ ọsọ ma agbaji m siri ike ka m wee nwee ike ịdabere na taya azụ, okporo ụkwụ ndị ahụ na-ebelata m.
Mgbe m rutere n'akụkụ ahụ, ọ bụ ihe gbasara taya ihu. Ma ọbụlagodi mgbe m dabere igwe kwụ otu ebe, m na-eje ije n'akụkụ akụkụ n'akụkụ ma n'ihu ma n'azụ. (egwu kọmputa na-atọ ụtọ) Emere m obere oge, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na taya m na ala dị iche iche.
Naanị maka obere echiche, m ga-anwale motas m. Yabụ ndị a bụ profaịlụ buru ibu, miri emi karị, nwepu ohere sara mbara karị iji hụ ka ha si arụ ọrụ nke ọma na apịtị ma ọ bụrụ na enwere nkwekọrịta ọ bụla nwere ọnọdụ mkpọ siri ike yabụ ọ bụ oge ịme nke ahụ na-agba ọsọ ọzọ echere m. (Joy electronic music) Dị ka ịhọrọ ụdị igwe kwụ otu ebe ịchọrọ ịzụta, a ga-enwe ụdị nkwekọrịta ọ bụla mgbe a bịara n'ihe akụrụngwa, n'ezie, mana site na taya na ụzọ a, ọ dị ka nke siri ike Ma ụzọ nzọ ụkwụ na taya apịtị jidere ihe ahụ nke ọma, mana na apịtị ndị a na-eme nnukwu ihe dị iche, ị ga-efunahụkwa taya ndị ọzọ.
Ya mere nye m nke a na-adị ka ezigbo taya niile maka oge oyi na UK, ebe m nwere ike idobe taya ụzọ maka taya niile maka taya n'oge ọkọchị ma ọ bụrụ na ịgaghị apịtị miri emi. Otu ihe a na-aga maka nhọrọ m ga-eme ịgafe mba m, n'ezie, ọtụtụ oge m na-arapara na profaịlụ dị oke ala, mana n'oge ọkọchị ana m arapara n'ihe dị ntakịrị ọsọ ọsọ, obere profaịlụ dị ala, mana ọtụtụ oge m na-eme ndị ahia ahia ma nọrọ n'etiti. Maka igwe kwụ otu ebe, enwere m ụzọ mgbochi ụzọ, yabụ ọ ga-akawanye njọ.
Mgbe m na-agba ọsọ agbụrụ, m na-aga maka taya ọkụ ọkụ, mana oge ka ukwuu, ana m anọkwu na nchedo. Otu ihe ahụ na m enduro igwe kwụ otu ebe, ukwuu n'ime n'etiti, ma mgbe m na-agba ọsọ m na-aga na nsọtụ ọzọ nke ọnụ ọgụgụ na m na-etinye na ihe nchebe taya. Ọ bụrụ na m na-agba ịnyịnya ihe dị ka Andes Pacifico, Aga m ewere nke a abụọ-ply taya na m na-achọghị ka n'ihe ize ndụ puncturing na m na-echeghị na na mmezi ibu.
Ọ bụrụ n’ịdị na-ele ozu nke taya, dịka m kwuru, ọ bụ ọkpụkpụ ka eji eme taya ahụ. Ọ bụrụ na anyị jiri taya abụọ na-agafe agafe, anyị nwere Barzo, nke bụ XC Race, na-emegide Peyote, nke bụ taya ụkwụ. Ihu ọma, nke a na-agwa gị ihe ị ga-atụ anya ya.
Ya mere, taya na-agafe agafe, na Vittorias, ha na-achakwa dị iche iche, ya mere, akpụkpọ ahụ maka ya na anthracite isi awọ maka ụzọ ụkwụ, nke bụ ike siri ike karị. The XC agbụrụ bụ ihe ibu ibu, ihu ọma obere ihe na ya, n'ihi ya, ọ na-aghọ Mkpa ọkụ maka ndị a ọduọ ọnọdụ. Ọ bụ ezie na taya dị n'okporo ụzọ nwere ọtụtụ ihe, ọ na-agbanye obere.
Ihe kachasị nchebe nchebe, mana ụgwọ ọrụ maka nke ahụ bụ ibu ibu. Ya mere, ị malitere site na ile anya na taya nke taya, ihe dịka TPI, eri kwa inch, na ụdị mkpebi otu siri sie ike ịchọrọ taya, kedu ka ị chọrọ taya? abamuru abụọ megide ibe ha. Ọfọn, iji bulie ọnụ ọgụgụ na taya okporo ụzọ, enwere m Martello a n'akụkụ akụkụ isi awọ ahụ, nke ahụ bụ ụzọ.
Ma ugbu a, nke ahụ bụ enduro casing. Ya mere, nke ahụ bụ ọkwa abụọ ugbu a, ya mere, akwa roba abụọ n'okpuru usoro a. Kedu ihe dị n'azụ? 120 TPI, dị ka nke a, mana dịka m kwuru, ọ nwere okpukpu abụọ, ya mere ugbu a ọ dị arọ karị, mana ọ siri ike karị, kwesịrị ekwesị maka enduro ma ọ bụ ọbụlagodi mgbago.
Naanị ihe akaebe ndị ọzọ na-agbawa agbawa, enweghị ike ịgbagharị. You ga-ahụ na ọtụtụ ndị nrụpụta nwekwara ụdị ntuziaka a na azụ na-agwa gị ụdị nzọ ụkwụ na ihe taya a ga-adị mma. Ọtụtụ kpakpando na-esi ike, ihe na-erughị maka mmiri mmiri na-erughị apịtị.
Ọ dị mma ịmata ụdị ala ị nwere ike ịnya ma hụ na taya ị họọrọ dabara adaba maka ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọ ala ugboro ugboro n'elu oke okwute, ị ga-achọ taya nke nwere nchedo mgbapu ka ukwuu yana akụkụ mgbidi siri ike iji kwado bumps siri ike. N’akụkụ nke ọzọ nke ụdịdị ahụ, ọ bụrụ n ’ịga n’ụzọ ndị dị mụrụmụrụ, taya nwere akụkụ akụkụ ndị toro eto ga-eme ka ị kwụsịlata ma baara gị uru.
Drivingdị ịkwọ ụgbọala nwere ike ikpebi ụlọ ị họọrọ, gụnyere onye na-agba ịnyịnya ibu, ịchọrọ ịkwọ ụgbọala ahụ na nchebe nchebe dị mma na ihe mkpuchi dị arọ karị. Nke ahụ na-enye gị taya siri ike karịa nke ahụ, ọ bụrụ na ị gbanye ike wee megharịa taya ahụ, ụfọdụ n'ime anụ ahụ na-acha ọkụ ọkụ nwere ike ịpịgharị, nrụrụ, nsị, ma ọ bụ ọbụna dọka. Agbagha agbagha? E nwere ọtụtụ mgbanwe na taya na-eme ka o sie ike ịchọta nke ziri ezi.
Yabụ ka anyị leba anya na isi ihe ruru unyi, nke dị nro, nke siri ike, nke rụrụ arụ ma ọ bụ nke apịtị, na ụdị ịkwọ ụgbọ ala. Nkọwa ngwa ngwa na ngwa ngwa maka XC na ntachi obi, nke ka ukwuu, profaịlụ na-eme ihe ike maka enduro na downhill. Ozu bu ihe owuwu.
Ogo dị elu karịa na nchebe karịa maka ịnya ụgbọ ike karịa, okwute ma ọ bụ ihe siri ike, ma ọ bụ ndị na-agba ogologo. Mkpa dị arọ maka ndị na-agbafe obodo, ndị na-eji ire ụtọ, ndị na-agba ọkụ ma ọ bụ ụzọ ụkwụ dị nro. N'ihe banyere nha, taya dị gịrịgịrị belata site na apịtị ma tụgharịa ngwa ngwa.
Taya sara mbara nwere ike ịse n'elu ebe ahụ, yabụ taya ndị nwere abụba na oke, sentimita ise n'obosara, nwere ike ịgba ịnyịnya na mmiri na snow. Igwe dị mma karịa taya dị ka sentimita 2.2 ruo 2.4.
Ọ bụrụ na ịnweghị, lee edemede Doddy na ụlọ ọrụ Vittoria. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ka taya si arụ n'ezie tubes na isiokwu tubeless na nrụgide taya, ihe ọzọ dị mkpa. Ka osila dị, a na m eji anwụ anwụ oge niile tupu mmiri ebido.
Kedu ihe bụ ịgba taya maka igwe kwụ otu ebe?
Mbido mbụ 'nkwafu taya'M & H mepụtaraTayana mbu 1950s maka iji na dọrọọduọ. Site na iwepu ihe ọ bụla grooves bee n'ime azọ, dịtayanye ndị kasị ibu-ekwe omume kọntaktị kwachie ụzọ, na jirichaa traction maka ihe ọ bụla e nyerenke haakụkụ.
Taya ị na-agbago na igwe kwụ otu ebe gị nwere ike ije ozi dị iche iche yana ịhọrọ ezigbo taya maka gị nwere ike ịbụ ihe siri ike n’ihi na mgbe nyocha ndị a niile emetụtala igwe anyị, ọ nwere ike ịpụta ọdịiche dị n’etiti mmeri ma ọ bụ mmeri ma ọ bụ ịda ma ọ bụ enweghị ọgba, ya mere, taa, aga m agafe ụfọdụ n'ime echiche ndị ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ usoro taya ịnyịnya ígwè gị ọzọ, taya ndị ị na-agbago na igwe kwụ otu ebe gị nwere ike ịbụ otu n'ime mmelite kachasị dị ọnụ ala ị nwere ike ịme na igwe kwụ otu ebe na ndị ọzọ Akụkụ agbakwunyere igwe kwụ otu ebe gị, ee, ha nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na nkasi obi anyị mgbe anyị na-agba ịnyịnya, na-ejide ma na-ejikwa ọsọ, yana oge anyị nwere ike iji n'akụkụ ụzọ nke idozi mmebi, yabụ ihe ndị a niile ga-abịa n'egwuregwu mgbe anyi nwere nhoputa ndi ozo, ma o di nwute na odighi otu taya nke dabara onye obula ma obu taya anwansi nke na-emetuta ihe niile. Mgbe mgbe, ebe ị na-ebute ụzọ n'otu mpaghara, ị ghaghị imebi iwu na mpaghara ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, taya nke dị nro, nke nwere ọfụma nwere ike bụrụ ihe na-adakarị ngwa ngwa karịa, mana mgbe ahụ, taya ndị na-agba ume na-esi ike karị, ọ ga-abụkwa na ọ ga-efu gị karịa watts na taya dị nwayọ iji gwa gị nke taya ịzụta taa, mana m Aga m agwa gị Nye gị ozi dịka o kwere mee ka i wee nwee ike ikpebiri onwe gị ihe ị ga - ebute ụzọ n ’ihi na taya ahụ bụ ọsịsọ, ọ bụ nkasi obi, ọ jidere ya, nsogbu ya, wdg, wdg.
Nke a nwekwara ike ịgbanwe n'ime afọ, dịka ọmụmaatụ ebe a na UK n'oge anyị nọ n'oge oyi ma ihe ndị m na-ebute ụzọ agbanweela. Achọrọ m eriri nke na-enwe mmetụta na-eguzogide ọgwụ ma nwekwuo njide, ebe anyị nwere Wet ụzọ, ụzọ na-amị amị ka anyị na-abanye n'oge ọnwa ọkọchị Gaa mmiri, mgbe ahụ, m na-achọ ebe a na-achọgharị na achọrọ m ịnweta ihe na-enweghị ike imegide tupu anyị emesịa ndị dị iche iche Ka anyị gafee nhọrọ taya dị iche iche maka gị, yabụ enwere atọ isi nhọrọ ebe a anyị nwere clincher tubular na tubeless ugbu a, ndị kasị nhọrọ taa bụ eleghị anya clincher na mfe n'ihi na nke mfe nke iji na egosipụta ọtụtụ a nwere ha ugbu a a waya ma ọ bụ a bead onu nke nwere ike ịbụ na ntukwasi-obi ekpochi n'ime rim nke wiilị ahụ wee jiri taya dị n’ime gị nwee ọkpọkọ nke ị nwere ike pịa ụtarị ma ọ bụrụ na taya akụ gị adaa taya ahụ wepụta ya n’ime tube wee tinye nke ọhụrụ ma ọ bụ dozie nke ahụ n’ime sooks ma weghachi ya na, ọ bụ n'ezie dị nnọọ mma, dị mfe iji ma na-ekenyekwa ọtụtụ uru arụmọrụ ị nwere ike ịchọta na ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ na-akpọrọ anyị gaa na nhọrọ nke ọkpọ, ihe a na-ahụkarị maka ịgba ọsọ na n'oge gara aga ọ dị ka afọ iri gara aga na nke ahụ bụ n'ihi na ha dị mfe ma ugbu a enwechaghị ike imegharị. Ha bụ otu tube na ọkpọkọ ha ugbu a, nke pụtara na ị ga-agbanye ma ọ bụ tinye ha na rim ka ị tinye ha n'elu wiil gị na-eme ka ọ dị ntakịrị ma ị ga-etinye ha ọzọ imebi ya nwere ike ịbụ obere nsogbu iji dozie ya na mgbe ahụ anyị nwere tubeless taya nke nwere ọtụtụ nke otu àgwà dị ka clincher taya, ha na-ele anya yiri nnọọ ma e wezụga na ha siri ike karị dakọtara na ime profaịlụ nke wheel na na pụtara na mgbe ahụ, dị ka aha ahụ na-egosi, ha enweghị tube, ọ dịghị tube ọ bụla a chọrọ iji banye n'ime ihe ndị a, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ha nwekwara ike ịga ije n'ụzọ ahụ ozugbo ị nwere taya taya a na-enweghị tube n'elu wiilị ahụ, wee gbasaa ụfọdụ akara tubular n'ime taya na nke a na-arụ ọrụ iji gbanye obere oghere ọ bụla ma ọ bụ anya mmiri na taya n'ụzọ ahụ na-atụ anya na ị gaghị akwụsị ịkwụsị ya mgbe ị na-aga, ị ga-efunahụ obere nrụgide dịka ọ bụ naanị ihe mmadụ kwesịrị ịkpachara anya ọ bụ na ọ dị nnọọ nke ọma na n'ime ner rim nke wheel na ọ nwere ike ịbụ ezigbo ihe siri ike ịgbakọta Ugbu a gaa na nhọrọ nke taya taya na n'ezie anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ebe a ihe atọ kachasị mkpa ga-abụ 23c 25c na 28c, c na-ezo aka na millimeters, ya mere obosara nke taya tụrụ na widest ebe mgbe ọ na-arụnyere Echere na ngwa ngwa taya ọ ga-ebipụ site na ifufe, ma n'oge na-adịbeghị 25c nweela elu aka na bụ maa ndị ọzọ na-ewu ewu na na nwere ike ada iju, o nwere mkpumkpu ma saa mbara karị kọntaktị ebe nke n'ezie na-arụpụta a ala otu Rolling eguzogide, nke mere na a ngwa ngwa taya chọrọ obere mgbalị.
N'ezie, njigide ahụ abawanyela, nke na-eduga n'ọdịdị ikuku dị elu, mana ya na-ewu ewu na-arịwanye elu, a na-emepezi wiil ndị ọzọ maka iji ya na taya 25c, anyị na-ahụ ụzọ dị mma nke ikuku na taya ndị a anyị nwekwara 28c sara mbara. taya na anyị na-na-ibu ọzọ o nwere a wider kọntaktị ebe ọzọ nke nwere ike n'ezie ịkpata obere Rolling ndị na-eguzogide na ndị ọzọ adịgide na ụfọdụ na taya, anyị na-ahụ ihe anaerodynamic ntaramahụhụ na ụdị taya, ya mere na anyị anaghị emekarị na-ahụ ndị a na ọduọ anyịnya igwe. , ma ọ bụ karịsịa na ihu wheel, ma anyị na-ahụ ha ọzọ na ndị ọzọ na azụ wiil dị ka m nwere ya ebe a na igwe kwụ otu ebe m n'ihi na ọ bụ obere nke a ntaramahụhụ azụ ebe a, ma otú m kwuru na ọ na-enwekwu adịgide na ọ bụ ya mere dịpụrụ adịpụ site na ọdụ ụgbọ elu na ọ bara uru ịlele aro ndị na-emepụta wiilị ahụ tupu ịzụrụ taya ọhụrụ ka ụkwụ ị nwere na igwe kwụ otu ebe gị nwee ike dabara otu ụdị taya taya a ma ọ bụrụ na ị na-eji taya sara mbara karịa warara, n'ihi na ọpụpụ mpi, ọ nwere ike ịgwaghari na ọ bara uru ịlele na ị na-enweta ya naanị mgbe m chọrọ ijide ya na ihe na-ekpebi oke ike taya nwere n'okporo ụzọ, na-emegide nkwenkwe a ma ama, ịzọ ụkwụ taya nwere obere mmetụta na anyị jidere n'okporo ụzọ. Nke ahụ bụ n'ihi na okporo ụzọ siri ike ma sie ike karịa taya taya ahụ enweghị ike ịmetụta echiche n'okporo ụzọ ahụ ọkachasị na ngwongwo taya ahụ na ngwongwo roba nke taya a na nke dị nro nke a, ka ọ na-ejidekwu ya mana ị nwere ike iche. ọ, nke dị nro nke ogige ahụ, obere ihe mgbapụta ọ bụ ya mere ọ ga - esikwu ike njikọ ahụ, na - enwe mmetụta na - eguzogide ọgwụ, mana obere ijide ya na - aghọ aghụghọ. Amaara m, mana ọ bụrụ na ị dị njikere iji obere ego karịa, enwere ụfọdụ ogige si ebe ahụ na-anwa imezu ha abụọ, otu n'ime ha na onye a ma ama bụ Continental Grand Prix oge anọ ọ bụ oge m Ejirila m ọtụtụ ibu karịa ọtụtụ afọ, ejiri roba na teknụzụ dị elu na-eme ka ọ sie ike yana mgbidi mgbidi dị ike, na-eme ka ha bụrụ ihe akaebe ma nwee ezigbo njide, ụzọ ọzọ ịchọta njide dị mma maka oyi oge vingkwọ ụgbọala na taya na a ala nsogbu n'ezie enwe Rolling na-eguzogide dị ka kọntaktị ebe na ala na-abawanye a otutu ihe na m na-eme ihe n'eziokwu na m nọ n'ebe na n'ezie ọjọọ ihu igwe ma ọ bụ na ụzọ na hụrụ na okporo ụzọ bụ n'ezie nnọọ ezi kegriiz m n'ezie na-etinye ntakịrị ihe nrụgide na taya m naanị nsogbu bụ na ị na-ahapụ nke ukwuu na n'ikpeazụ ị na-agba ọsọ ahụ, m na-adaba na tube na taya ahụ, mana nke ahụ bụ n'ezie otu n'ime nnukwu uru nke tubeless iche n'ihi n'ezie ihe re dịghị tube otú i nwere ike n'ezie na-agba ọsọ ha na a ala nsogbu na-enweghị nchegbu banyere a tuo nke ewepụghị nwere ime dị ka anyị na-akpali n'ime okpomọkụ na ma eleghị anya, ọduọ amalite ọzọ, mgbe ahụ ikekwe na-ezighị ezi na-ezighị ezi na-elu na anyị na-ebute ụzọ ugbu a ndu adị kpebisiri ike bụ site na obosara nke taya ahụ, nzọ ụkwụ nke taya ahụ na ngwongwo nke taya ahụ, ugbu a anyị atụleworị na taya ndị sara mbara karị na-enwekarị nkwụsị na-agagharị agagharị karịa taya ndị dị warara karị na ndị na-agbagharị taya ahụ. mee ka taya ahụ dịkwuo nro, ọ ga-eme ka nkwụsi ike a na-atụgharị karịa ka taya a na-atụgharị karịa, mana ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị mgbe anyị bịara na ogige ahụ, n'ihi na taya nwere ngwongwo dị nro nwere n'ezie nke na-agbanwe agbanwe, n'ezie enweghị nguzogide na-enweghị atụ karịa ndị nwere obere Ngwakọta na-agbanwe agbanwe ma sie ike ugbu a enwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka ebe a, mana ọ bụ ezie na ogige ndị siri ike na-agbapụta ihe dịka ọ bụla rivet n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'okporo ụzọ na-aga n'okporo ụzọ ka ha na-agagharị nwayọ , ihe na-agbanwe agbanwe ogige na ndị a rivets na bumps n'okporo ụzọ nwere ike deform, nke n'ezie na-ebelata ume ọnwụ mgbe na-amụba adịgide n'ihi na ọ na-anọ n'okporo ụzọ na-enwe olileanya na ị ka na mether, ya mere nnoo ihe ị na-achọ A taya na okpu dị larịị, ma eleghị anya, ọ ga-adị ntakịrị karịa 25 Celsius C, mana yana ngwakọta dị nro, ihe dị ka Victoria Corsa Speed ​​na-abịa n'ụdị ya zuru oke. Ọ bụ ezigbo mma dị nro na ngwongwo dị nro na mgbe ịchọrọ inweta nke ahụ n'ihe dị ka mils 25 nke zuru oke, n'ezie enwere taya na ebe ahụ na-ekwu na ọ dị mma dịka o kwere mee na Continental Grand Prix 5000 bụ ezigbo ihe atụ nke a ọ nwere nkwụsi ike na-agagharị agagharị ọ nwere obere nguzogide aerodynamic, mana nwekwara ihe mgbapu-akaebe N'ikpeazụ, isi ihe ole na ole tupu ị gbasaa isiokwu a, ekwuru m banyere eziokwu ahụ na usoro nzọ ụkwụ nwere ntakịrị mmetụta na njigide anyị nwere n'okporo ụzọ, mana n'eziokwu, ụzọ a na-abawanye nwere ike ime ka ike karịa inogide na mmetụta na-eguzogide dịka enwere ihe ndị ọzọ na taya.
Ọ bụrụ na ị nọ n'ọtụtụ ebe dị iche iche, nke a nwere ike bụrụ ezigbo nhọrọ maka ile gị anya .Ma ọ bụrụ na ị na-eji turbo trainer na igwe kwụ otu ebe, yabụ tinye ụkwụ azụ n'azụ na agba turbo, wee kpachara anya n'ihi na ebe ị nọ n'ọnọdụ ahụ edozi ma ọ dị ọkụ, ị nwere ike mebie taya ahụ - kpachapụ taya niile gburugburu yana ọkachasị na taya ndị a dị nro ị na-ada ngwa ngwa ka i wee nwee ike ịkwụsị ihe ahụ dị larịị nke doro anya na-ebelata traction n'okporo ụzọ, ọ ga-adị ezigbo egwu ma mee ka ọ bụrụ obere ihe mgbapụta na ị nwere ike ịnweta turbo ọpụrụiche ị nwere ike gbanwere ma pụọ, nke bụ n'ezie ntakịrị mbanye anataghị ikike ma ọ bụrụ na ị bụ n'ezie ị nwere ike ịnweta wheel wheel enwere ike ịpụpụ na nke apụ Turbo-Ready tire arụnyere, yabụ ebe anyị na-aga, enwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu, n'ezie ị ga-etinye aka na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla mee ike anyị niile zaa gị. Ekwesịrị m ịsị na Grand Prix 5000 taya bụ ihe dịịrị m! chọta ezigbo onye ọ bụla, ọ bụ ezie na ekwuru m na ọ masịrị m na taịlị anọ nke taịlị na-agba n'oge oyi ma eleghị anya ọ ga-abawanye ma enwere m olileanya na ị nwere mmasị na edemede nke taa, ọ bụrụ na biko biko nye ya dị ka echefula anyị na-aga n'ihu mgbasa ozi mgbasa ozi na denye aha anyị n'okpuru
Kedu ihe bụ ebumnuche nke isi na-anya ụgbọ ụkwụ?
.B.tuo ụzọbụ ngwa-enyere gị aka ijide njigide nkewiilma megharia na ngagharị dị nwayọ na obere nrụgide aka nri ma ọ bụ aka ekpe.Mar 22 2019
Nke a bụ ntugharị m na 2019, ndị ọkwọ ụgbọ ala nke etinyela aka na ọkwa mbụ nke ịhazi ụgbọ maka ụgbọ ala ọhụrụ ma ọ bụ maka oge ọhụrụ, nke ahụ gụnyere ihe niile site na ọdịdị ahụ nke sterịn ahụ, na nhazi nke bọtịnụ, ka o si emekọrịta ya Na sistemụ mgbagwoju anya niile na bọọdụ ahụ, ntinye gị dị oke mkpa na ihe anyị na-eme, na n'ezie, ha bụ ndị ga-eji ya kwa ụbọchị. A na-ewu wiil ahụ gburugburu ndị na-agbanwe agbanwe nke siri ike n'ụgbọelu ma sie ike megide ihe na-enweghị isi n'okpuru vibrations nke ị na-eche n'echiche na onye na-agba ịnyịnya na-eji wiil a na gburugburu ebe nwere mgbatị siri ike na-eyi gloves ndị e mere maka Genda ga-enweta ikike izizi mbụ site na injin ahụ. na dabere na ọduọ ọnọdụ anyị nwere ọtụtụ dị iche iche modifo r ịgbachitere ụgbọ ala ọzọ ma ọ bụ na-awakpo ma ọ bụ na-azọpụta ndị engine mgbe anyị nwere ike, ma ọ bụ a bit ọzọ ojiji si mg UK mgbe ọ dị mkpa ụzọ ụzọ ọsọ limiter na-emekarị setịpụrụ ma 80 ma ọ bụ 60 km / h dabere na njedebe nke egwu maka ụzọ olulu ejiri aka m mee, ọ bụ ezigbo nhọrọ dị mma, anyị na-aga agba mbụ nke oge a na wiil atọ maka ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla na ndị na-agba ịnyịnya ga-agba ọsọ atọ niile N'ezie nke a izu ụka, ma eleghị anya, ndị isi wheel, ha ndabere wheel na n'ebe nn nnwale ibuo na ụfọdụ ụdị usoro na anyị na-arụ ọrụ na nwere ike evolve n'ọdịnihu ọdịnihu nke N'ezie nke a nyere agbụrụ izu ụka. Anyị na-agbanwe ntọala nke igwe kwụ otu ebe dabere na mkpa ndị ọkwọ ụgbọ ala E nwere n'ezie ihe achọrọ maka ụfọdụ egwu, mana ụzọ ha si eji ụgbọ ala emepụtakwa ihe dị ka afọ na gburugburu ụzọ mbụ nke Melbourne nke afọ ahụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala na-aghọ ha abụọ. .
M na-ele anya n'apata ụkwụ nke afọ gara aga, ha na-eme ihe tinyere mgbanwe mgbanwe 150 n'oge iru eru, ha na-eduzi nkuku 17 azụ, ha na-eme mgbanwe asaa ma ọ bụ asatọ na ntụgharị rotary na-aga n'apata ụkwụ, na n'ezie ha na-eme mgbanwe Ha weghachitere anyi ozi ha huru na dashboard. The mmekọrịta na ụgbọ ala ozugbo ọ bụ na ụzọ bụ site na-akwọ. Anyị nwere ike ịtụ aro n'ụgbọala n'onwe anyị.
Anyị ga-agba mbọ idozi ụdị ahụhụ ọ bụla ọ bịara, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ihe ọ bụla na steeringi ahụ anyị ga-eme nke ahụ site na onye ọkwọ ụgbọ ala, nke a bụ bọtịnụ redio iji kwuo okwu ka m na-apị ya. gwa ụmụ okorobịa okwu ma gwa ibe ha okwu ma mgbe m pịrị bọtịnụ ahụ ọzọ, ọ na - ewere usoro nke ndị ọkwọ ụgbọ ala na-agbanwe site na ntanetị iji soro usoro ịgba ọsọ ahụ, n'otu aka Melbourne ụzọ mbụ nke afọ a bụ n'okporo ámá n'okporo ámá ma ya mere na-enye ụfọdụ nsogbu ndị pụrụ iche site na nke a, ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ịgba ọsọ dị ka Monaco, anyị na-ahụ na ọ bụ ụzọ dịkwa egwu ahụ, mana ọ dị iche n'ụzọ ha si eji wiil ndị ahụ, na, na Melbourne, ha nwere oge iji chee echiche banyere mgbanwe ha na ịkọwapụta nke ọma mgbe a na-agbada, dịka ọmụmaatụ n'okpuru ọnọdụ braking siri ike na Monaco ihe niile siri ike na enwere ike ịpụ apụ na mpaghara mgbanwe mgbanwe bụ na-akpachikwu anya na ha nwere t react na-eme ọtụtụ ihe ka mmụọ ebe a anyị nwere ụfọdụ rotaries nke bụ maka ọnwụ ntinye ebe a anyị nwere ihe dị iche maka nkuku etiti, yabụ mgbe ụgbọ ala gbanwere nkuku n'etiti nkuku, ọ na-agbanwe ụgbọ ala mara mma ngwa ngwa, ị nwere ike ma ọ bụ n'okpuru ma ọ bụ karịa, ọ bụrụ na anyị edozie ebe a, bọtịnụ na-anọpụ iche anyị họọrọ bụ nnọpụiche mgbe anyị kwụsịrị ụgbọ ala ahụ ma ọ bụ mgbe agba ọsọ ahụ na mgbe anyị jidere ya ruo ogologo oge, ka anyị nweta gia m don Echeghị m na ejirila m ụgbọ ala ma ị maghị na ọ nwere ike ịrapara ebe na Monaco ma gbanwee ihe nwere ike ịbụ naanị ụzọ iji zọpụta gị, usoro 1 nke oge a bụ ezigbo igwe dị mgbagwoju anya ma jụọ ndị ọkwọ ụgbọala ka ha rụọ ọrụ abụọ usoro. Anyị chọrọ ka ha bụrụ ndị na-enweghị nghọta bụ ndị ha na ụgbọ ala na-emekọ ihe dịka ha gaara eme go-kart mgbe ha bụ ụmụaka, mana anyị chọkwara ka ha ghọta ihe dị larịị nke elektrọniks na sistemụ nke ọ ga - ewe iji nyocha, ịghọta nke ahụ. ọ nwere ike ịdị ka ihe dị mgbagwoju anya na mbido, mana na-eme ya ma amaara m ya n'isi
Kedu ihe kpatara taya igwe ji agba agba?
Ọ bụ ikuku na-esi n'imetayan'ime ozu ma ọ bụ n'ahụ nketaya. Ihe na-akpata sidewallafụ? Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'imeegosipụtakpatara mmebi mmetụta. Mgbe atayaakụda a nkọ ihe na ụzọ ike si arọ na ọsọ nkeugbo alalekwasịrị anya na obere mpaghara kọntaktị.
Kedu ụdị taya dabara 26 anụ ọhịa rim?
Industrylọ ọrụ ahụ zara site n'ime ka 'Middleweight'taya, akara26x 1,75 kadabaraotu iherim. Ọ bụ ezie na a ka na-akpọ ha '26 sentimita asatọ', ndị atayabụ n'ezie 25 5/8 ', ọ bụghị26'. Otu arim nhaNdị ọsụ ụzọ oge gboo 'klunkers' nakweere, wee bụrụ ọkọlọtọ maka igwe kwụ otu ebe.
Ọ na-adị ire ụtọ taya ka mma?
Nnukwutaya ka mmatraction site na irite uru na nnukwu kọntaktị ahụ,nkwafu taya ka mmatraction site n'ịhụ na a na-eji inch ọ bụla nke kọntaktị kọntaktị ha rụọ ọrụ nke ọma. Cheedị, ọ bụrụ na elu taya bụ 10% zọchaa, ọ ga-enwe akara kọntaktị pere mpe karịa 10%nkwafutaya nke otu nha.June 30. 2015 g.
Taya ndị na-akwọ mụrụmụrụ na-aga ngwa ngwa?
Na mpempe,nkwafu tayana-adaba adaba na njem igwe. Ha na-ejidesi ike nke ọma ma nye gị ọsọ ọsọ ka mma. Na mgbakwunye na nke a, ha na-arụ ọrụ nke ọma na akọrọ ma mmiri mmiri, n'adịghị ka ndị ibe ha zọchara ụkwụ.June 25. 2021
Ntugharị isi ọ dị mma ka ọ dị njọ?
Na,Akpunwere nchebe zuru oke, ọ bụrụ naanị na ị na-eji ebe ị na-adọba ụgbọala ma ọ bụ na-atụgharị uche na-agba ọsọ ọsọ, dịka na ọsọ ọsọ dị elu ị na-apụ na teh na-eche nkesterịnsi otú na-efunahụ njikwa.23.12.2015
Gini bu igwe eji atughari?
Ihe 'Na-eduziIgbaOgwuJoel R. Thorp nke Wisconsin mepụtara Knob 'na 1936. Aha Brodie ahụ na-ezo aka na Steve Brodie ma bụrụkwa nke a na-akọwa ụdị ụdị aghụghọ niile. A na-akpọkarị ngwaọrụ a 'igbu onwe ya' n'ihi abaghị uru maka ịchịkwa wiil ahụ n'oge mberede.
Kedu ihe kpatara taya taya n'okporo ụzọ ji akụ ha?
Okporo ụzọ awara awara na apịtị ma ọ bụ unyi na-egosipụta usoro akpịrị onye ọ bụla iji mee ka taya ahụ taa n'elu ma nwee ike ijide akụkụ nke nzọ ụkwụ iji nweta mma. Nyere nkedo kọntaktị dị obere, taya ndị a na-eyi ngwa ngwa mgbe ejiri ha na asphalt (dabere na ụdị roba).
Kedu ka esi eji micro knobs na taya igwe kwụ otu ebe?
Obere obere na Micro na-ewu ewu na cyclocross, gravel, na taya. A na-eji okpu ndị a na-emighị emi na kọmpụ iji belata ịdị ike taya ma melite arụmọrụ na-agagharị, n'agbanyeghị na traction na traction rụrụ. Ha na-ekwekwa ka nzọ ụkwụ na-agbanwe karịa otu na casing taya.
Enwere ike iji taya mkpọtụ n'okporo ụzọ awara awara?
Iwu iwu n'okporo ámá, taya na-ada ụda anaghị adịkarị mma maka ụzọ dị ogologo ma ọ bụ n'okporo ụzọ awara awara n'ihi adịghị mma NVH na oke ịwụ na roba dị nro. Dabere na atụmatụ ahụ, enwere ike ịkpọ taya taya ụzọ 'ala niile' ('All-around'), nke pụtara na e zubere ya iji ma ụzọ ma n'okporo ụzọ.